လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » ဂျော့ဘ် » လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ
တိရစ္ဆာန်များအဘို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်သင့်စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်မှုကိုသုံးပါ။ PETA က Twitter, Facebook, Instagram ကိုနှင့် Snapchat ကန့်သတ်ထားအပါအဝင်သော်လည်းမ, ပလက်ဖောင်းအမျိုးမျိုးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာလူမှုမီဒီယာရှေ့မှောက်တွင်အထောက်အကူပြုရန်လူမှုမီဒီယာ content တွေကိုထုတ်လုပ်သူရှာကြံနေပါတယ်။ PETA ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်အများဆုံးစေ့စပ်-နှင့်အတူမေတ္တာဖြစ်ပါသည်နဲ့ Hard-နှိပ်စိတ်ခံစားမှုတိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးကိုအကြောင်းအရာနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတစ်လနီးပါး 150 လူဦးရေသန်းအထိရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာအဖွဲ့ strategize နှင့်နေ့တိုင်းအွန်လိုင်းစပ်စုလူရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုသူကိုသတင်းထောက်များအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်လိုအပ်နေတိရစ္ဆာန်များအဘို့ပျံ့နှံ့အသိအမြင်အထောက်အကူပြုဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အကြောင်းအရာဖန်တီးသောသူထုတ်လုပ်သူများနှင့်မန်နေဂျာများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ 2018 တှငျကြှနျုပျတို့ PR စနစ်သတင်းများအမည်ရှိခဲ့ကြသည်လူမှု Shake Up ကိုပြရန်ရဲ့အကျပ်အတည်းစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အကောင်းဆုံး Tweet အကြောင်းအရာအမျိုးအစား 'အကောင်းဆုံးလူမှုမီဒီယာအဖွဲ့ 2019 အတွက်ကျနော်တို့က Shorty ဆုပေးပွဲ meme ကဏ္ဍပရိတ်သတ်ဂုဏ်ပြုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းနှင့်ဂုဏ်ထူးဆောင် PR စနစ်သတင်းပြောဆို' '။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်စတီဖင် Colbert အတူနှောင်းပိုင်း Show ကိုမှ BuzzFeed ဖို့က CNN မှရှေ Meyer နှင့်အတူနှောင်းပိုင်းညကနေမရေမတွက်နိုင်တဲ့မီဒီယာအတွက် featured ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်တစ်ခုပေါ်တွင်တဦးတည်းတစ်ခုတည်း post ကိုမကြာခဏလူဦးရေတစ်သန်းကျော်ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့၏အဖွဲ့ join လျှင်သင်အနေနဲ့သက်ရောက်မှုအောင်လိမ့်မည်မဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုလည်းမရှိ။
•သင်သည်ဆွဲဆောင်မှုအကြောင်းအရာ-နှစ်ဦးစလုံးစကားများနှင့်ပုံရိပ်-များအတွက် PETA ရဲ့ Instagram ကို, Twitter Facebook, Snapchat အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်ပူးပေါင်းနှင့်အခြားလူမှုမီဒီယာအဖွဲ့နှင့်အတူအံပါလိမ့်မယ်။ အကြောင်းအရာစိတ်ခံစားမှု evocative ဖြစ်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်မျှသာစကားလုံးများနှင့်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပုံရိပ်နှင့်အတူတစ်ဦးပုံပြင်ကိုပြောပြရပေမည်။
တိရိစ္ဆာန်များမှတပါးကူညီပေးခြင်း• PETA ရဲ့အကြီးမားဆုံးဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်ကလူမှုရေးအသင်း PETA ရဲ့အကြီးမားဆုံးပြဿနာများကိုတွန်းအားပေးနှင့်အရှင်အများပြည်သူသူတို့ရဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့တိရိစ္ဆာန်များယူရတဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်နဲ့အခြားဌာနများမှဦးစားပေးအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျလညျး, သငျသညျပို့စ်တင်နေကြအရာအားလုံးကိုထိတွေ့ဆက်ဆံကြောင်းအာမခံဤဌာနများနှင့်အတူလိုက်ဖို့တိကျဆကျသှယျနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုဆွဲဆောင်မှုပါလိမ့်မယ်။
•ဒါကြောင့်သင်၏အလုပ်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ပုံတူပွားကြိုတင်အောင်မြင်မှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်ပါကြီးထွားဖို့နှစ်ဦးစလုံးနည်းလမ်းတွေရှာတွေ့ပြီးတော့, သင့်အလုပ်နှင့်၎င်း၏အွန်လိုင်းတုံ့ပြန်မှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပါလိမ့်မည်, အွန်လိုင်းပရိသတ်ကိုဖို့ဘယ်လိုအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်သတင်းအချက်အလက်သင်ယူဖို့ကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးယူ !
•သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အွန်လိုင်းပရိသတ်ကိုသိရန် get နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကိုသူတို့တုံ့ပြန်နှင့်ရှယ်ယာတွေ့မြင်, သင်သည်ထိုသူတို့မျှဝေဖို့တွေအတွက်အံဝင်ခွင်ကျစီမံထားတဲ့အကြောင်းအရာဖန်တီးကူညီပေးပါမည်သည့်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့တိရိစ္ဆာန်အခွင့်အရေးကိုအနိုင်ရချင်လျှင်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ပရိသတ်ကိုနှင့်၎င်းတို့၏နောက်လိုက်များ၏ရှေ့မှောက်၌အကြှနျုပျတို့၏အကွောငျးအရာမြားရနျလိုအပျ!
•သင့်နေ့တိုင်းတစ်ဦးသောအဘို့ကို, လူမှုရေးမီဒီယာများတွင်လက်ရှိခေတ်ရေစီးကြောင်းသုတေသနပြုနောက်ဆုံးပေါ် meme တူသောအရာထိပ်ပေါ်မှာတည်းခိုနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှု PETA ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုအသိပညာလျှောက်ထားပါလိမ့်မည်။
•လူမှုရေးမီဒီယာအောင်မြင်မှုအစစ်အမှန်အချိန်အတွက်သရုပ်ဆောင်အပေါ်မူတည်ပြီးကတည်းကကျနော်တို့တဲ့အခါမှာယခုအချိန်တွင်သပိတ် post (နှင့်အချို့သောအခါသမယတွင်, ယခုအချိန်တွင်စနေနေ့ညဉ့်တွင်9ညနေဖြစ်ပါသည်) ။ သင်တို့သည်လည်းအရေးပေါ်သတင်းများကို post အချို့ကိုအားလပ်ရက်နှင့်တနင်္ဂနွေရရှိနိုင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။
•သင် Instagram ကို, Twitter Snapchat, နှင့် Facebook တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိလားမသာပေမယ့်သင်အကြီးမားဆုံးအသီးအသီး platform ပေါ်တွင်လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်မည်သို့တစ်ဦးချင်းစီပရိသတ်အတွက် captivating အကြောင်းအရာရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူကိုသင်တို့သိကြ၏။
•လူမှုမီဒီယာအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုအပေါ်ဒီတော့အကြီးအကျယ်မှီခိုကတည်းကကို Photoshop နှင့် Premiere ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနည်းဆုံး Adobe က Creative Cloud အချို့နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖြစ်သင့်သည်။
• Excellent ကစာအရေးအသားနှင့်အဖွဲ့အစည်းကျွမ်းကျင်မှု: လူမှုမီဒီယာအပေါ်ကသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပြီးဖို့ထက်နည်းသုံးစက္ကန့်, ဒါကြောင့်တိုင်းအသေးစိတ်ရေတွက်ရှိသည်!
•ကြှနျုပျတို့လူမှုရေးမီဒီယာစာမျက်နှာများပေါ်တွင်အဆိုပါအကြောင်းအရာမကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားအွန်လိုင်း channel များကိုမဆိုထက် ပို. လူတွေရောက်ရှိ။ ထိုအစာမကျြနှာအဘို့အကြောင်းအရာ Creating ကြီးမားတဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်, သင်ယုံကြည်မှုနှင့်တိုးတက်စေရန်မည်သို့တုန့်ပြန်ချက်မှပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းစဉ်ကအပေါ်ကိုယူဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ရပါမည်။
•သင်သည်အလျင်အမြန်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်များစွာသောပန်းတိုင်များနှင့်အတူကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုသွားလာခြင်းကိုခံရပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးလွတ်လပ်စွာနှင့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူသွားလာရင်း-getter လိုအပ်ပါတယ်။
•သင်, အလုပ်ဦးစားပေးဖို့သက်သေပြနိုင်စွမ်းရှိတယ်မျိုးစုံတာဝန်များကိုကိုင်တွယ်, ဖိအားအောက်မှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်မလုပ်ခြင်း, သတ်မှတ်ရက်တွေ့ဆုံရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
•အလင်း၏အမြန်နှုန်းမှာလူမှုမီဒီယာရွေ့လျားဒါကြောင့်သင်အမှန်တကယ်တိုတောင်းသောအချိန်ပြကွက်အတွင်းအရည်အသွေးမြင့်အလုပ်ထုတ် crank နိုင်ဖြစ်ရပါမည်။
•သင် PETA လှုပ်ရှားမှုများနှင့်တိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွင်းမှထွက်ကိုသိရှိရမည်ဒါသင်, ပင်မပရိသတ်ကိုကြှနျတျောတို့၏မက်ဆေ့ခ်ျကိုထွက်ရတဲ့အတွက်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မယ်။
•သင်သည် PETA ရဲ့ဒဿနကိုထောကျပံ့များနှင့်ပညာရှင်ပီသစွာကိစ္စများပေါ်မှာငါတို့ရာထူးထောက်ခံနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် photoshop ထုတ်လုပ်မှု SJGolden - လူမှုမီဒီယာအကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူ ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း	2019-05-15
နောက်တစ်ခု: စာရင်းကိုင် Manager ကို